Global Voices teny Malagasy » Gazety Henja-Pisainana Nakaton’i Iran fa Nanohitra ny Fifanarahana ara-Nokleary · Global Voices teny Malagasy » Print
Gazety Henja-Pisainana Nakaton'i Iran fa Nanohitra ny Fifanarahana ara-Nokleary
Voadika ny 04 Aogositra 2015 15:37 GMT 1	 · Mpanoratra Mahsa Alimardani Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
Nametrana ny voambolana “fanakatonana” ambonin'ny fonom-pejin'ny gazety 9 Dey ny fampitam-baovao Iraniana. Sary navoaka ho azo ampiasaina hita tao amin'ny banifilm.ir .
Nakaton'ny Sampan-draharaha Mpanara-maso ny Gazety Iraniana ny 9 Dey , gazety henja-pisainana namoaka fijery misintaka amin'ny fifanarahana ara-nokleary voasonia teo amin'i Iran sy ny firenena P5+1, nosoniavina tao Vienna tamin'ny 13 Jolay.
Nakaton'i Iran ny gazety henja-pisainana mivoaka isan-kerinandro noho ny nitsikerany ny fifanarahana ara-nokleary
Tonga herinandro vitsivitsy taorian'ny namoahan'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fitarihana Islamika ho an'ny mpanao gazety Iraniana amin'ny fitarihan-dalana ara-panivanana izay fomba iresahana ny fifanarahana izao fanakatonana izao. Tamin'ny tatitra ho an'ny IranWire, novelabelarin'i  Mansoureh Farahani tahaka izao ilay fitarihan-dalana :
Ao amin'ny fitarihan-dalana, dia norarana ny hamoahan'ny mpanao gazety lahatsoratra mampitriatra hevitra amin'ny “manampahefana ambony ao Iran” – manondro ny fitondram-panjakan'ny Filoha Rouhani sy ny Mpitarika Faratampony ny Ayatollah Khamenei ary ireo mpiara-dia aminy akaiky. Ankoatra izay, nolazaina ny mpanao gazety tsy hitatitra zavatra “manasa atidoha” ny vahoaka hino fa ity fifanarahana ara-nokleary ity dia “manohitra ny firenena, ny Islamo na ny soatoavina sy ny idealy revolisionera”, notoroan-dalana ihany koa ry zareo tsy hitatitra zavatra mety “hampisara-kevitra ny fiarahamonina”.
Naroson'ny fanoroan-kevitra fa izay gazety mihaika ny rafitra dia mety hiatrika fanakatonana hatramin'ny roa volana. Voalazan'ny tatitra fa misy gazety henjam-pisainana tahaka ny Kayhan ihany koa efa nahazo fampitandremana.
Naaton'ny Birao misahana ny media noho ny resaka Fifanarahan'i Iran (ara-nokleary) ny henja-pisainana mivoaka isan-kerinandro iray, nampitandrina ny Kayhan gazety sy habaka mivoaka isan'andro be mpihaino.
Fito ny mpikambana mandrafitra ny Birao manaramaso ny gazety ao Iran, izay ahitana ny rafi-pitsarana Iraniana, ny parlemanta, ny Vaomera Faratampon'ny Revolisiona ara-Kolontsaina, seminarista iray ao amin'ny Qom ary ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Siansa. Efa noraran'ny  Birao ihany koa ny 9 Dey tamin'ny Avrily 2014 noho ny namoahany lahatsoratraheverina ho ‘manapa-tenda’ ny filoha sy ny fifaranarahana ara-nokleary.
Gazety avy amin'ny elatra ankavanana hiringiriny ao Iran ny 9 Dey, ary ny tompony dia i Hamid Rasaei, mpitondra fivavahana sady mpikambana ao amin'ny parlemanta avy ao Tehran.
Ny 9 Dey dia daty Persa manondro ny 30 Desambra, tsingerintaona manamarika ny diabe nataon'ny mpanohana ny governemanta an-dalambe tamin'ny 2009 ho fanoherana ny Hetsika Maitso.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/08/04/72739/
 tsingerintaona : http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/12/iran-anti-green-movement-protest-anniversary.html#